သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် စက္ကူစုတ်များနှင့် ပလတ်စတစ်အိတ်ခွံများ (ရဲမင်းသူ/သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်) - Alin-U-Yin
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် စက္ကူစုတ်များနှင့် ပလတ်စတစ်အိတ်ခွံများ (ရဲမင်းသူ/သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်)
Posted on September 7, 2017	by Nyan Alinn	0 Comments0
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အမှိုက်များသည် ယနေ့ကြုံတွေ့နေရသကဲ့သို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အမြဲ တစေ အဓိကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေခဲ့ခြင်း မရှိချေ။ Judd H. Alexander (1993)က ၎င်း၏ “In Defense of Garbage” (အမှိုက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး)ဟူသော စာအုပ်၌ ”ကျောက်ခေတ်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးဘီဘင် တို့ လက်ထက်တွင် လိုဏ်ဂူများအတွင်း ယာယီနေထိုင်ခဲ့ကြစဉ်ကပင် အမှိုက်သည် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
”သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ထိုပြဿနာကို ကျွန်ုပ်တို့ထက် လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က လိုဏ်ဂူများ အလွန်ပေါများပြီး လူဦးရေအလွန်နည်းပါးသည်။
”လိုဏ်ဂူများ၏ ကြမ်းပြင်ပေါ်နှင့် ဝင်ပေါက်များအနီးတွင် အမှိုက်စများ တဖြည်းဖြည်း စုံပုံလာသည့်အခါ လိုဏ်ဂူ များအတွင်း နေထိုင်သူများသည် အမှိုက်များကို နောက်တွင် ချန်ထားရစ်ပြီး နေရာသစ်များဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့သွား ရုံဖြင့် အဆင်ပြေသွားကြသည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် မကြာသေးမီက အဆမတန် တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် ဝန်ဆောင် မှုလည်း တိုးတက်လာခဲ့သည် တစ်နည်းဆိုရလျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏလည်း အကြီးအကျယ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာဟုလည်း ဆိုရမည့် ဤအမှိုက်ပြဿနာကို သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှု အများအ ပြားပြုလုပ်၍ ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုအချို့အရ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ လုံးဝ ကျိုးကြေပျက်စီးသွားစေရန်နှင့် သဘာဝအလျောက် မြေကြီး ထဲ ဝင်သွားစေရန် နှစ်ပေါင်း ၄ဝဝထိ ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
သို့ဖြင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြသည့် စားသုံးသူများသည် ပလတ်စတစ်အိတ်များအစား စက္ကူအိတ်များကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလာကြသည်။
သို့သော် ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်သည် မှန်ကန်ပါ၏လော၊ သို့တည်းမဟုတ် စက္ကူထုတ်လုပ်သူများက ၎င်းတို့စက္ကူ ရောင်းကောင်းအောင် တစ်ဖက်လှည့် ကြော်ငြာခြင်းလော။
စက္ကူလား ပလတ်စတစ်လား။ (Paper or Plastic)
စက္ကူထုတ်လုပ်သူများသည် ပလတ်စတစ်အိတ်ခွံအသုံးမပြုရေး လှုပ်ရှားမှုအများအပြားကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။
၁၉၈ဝ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ပလတ်စတစ်အိတ်များပေါ်လာခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် စက္ကူအိတ်ဈေးကွက်၏ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကို သတိပြုမိကြောင်း ဒေးဗစ်ဂျက်ကော့ဗ်ဆင် (David Jacobson) က ဆိုသည်။
တစ်ချိန်က ပလတ်စတစ်များထက် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းဈေးပိုကြီးသည့် စက္ကူသည် ထိုအချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ဆ မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် စားသုံးသူများ၏နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုသည် ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်း အပေါ် မူမတည်ပေ။
နည်းပညာအဆင့်မြင့်မား တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပလတ်စတစ်အိတ်များကို ယခင်ကထက် ပိုမိုပါးလွှာပြီး ပိုမို ပေါ့ပါးအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်လာသည်။
ထို့ကြောင့် ယခင်ကကဲ့သို့ ထားသိုစရာနေရာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း မလိုတော့ဘဲ သယ်ယူ ပို့ဆောင်စရိတ်လည်း လျော့ကျသွားသည်။
ထို့ကြောင့် သုံးစွဲမှုများသည် လက်ကိုင်ကွင်းများပါပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးသည့် ပလတ်စတစ်အိတ်များကို တစ်နေ့တခြား ပိုမိုသုံးစွဲလာကြရာ စတိုးဆိုင်များသည်လည်း ဈေးချိုသောအိတ်များကို ဆိုင်ပေါ်တင်လာကြသည်။
ကုန်မျိုးစုံထုပ် စက္ကူအိတ်ဈေးကွက်၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် စုစုပေါင်း ကုန်မျိုးစုံအိတ် ဈေးကွက်၏၂ဝရာခိုင်နှုန်းကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်ဟုဆိုသော Stone Container Corporation သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်၊ ဂျက်ဆင်ဗီးလ်မြို့နှင့် ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်၊ ဟာ့တ်ဖို့ဒ်မြို့များရှိ စမ်းသပ်ဈေးကွက်များတွင် စား ကုန်မျိုးစုံထုပ် စက္ကူအိတ်များ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာရေးအတွက် အကြီးအကျယ် ကြော်ငြာခဲ့သည်။
ထိုသီတင်း ၁၃ပတ်ကြာ လှုပ်ရှားမှုတွင် သတင်းစာများ၌ ကော်လံပြည့် ကြော်ငြာများ၊ ကြော်ငြာသင်ပုန်းကြီးပေါ် တွင် ကြေငြာခြင်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင် လူကြည့်အများဆုံး အချိန်၌ စက္ကန့် ၃ဝကြာ ကြော်ငြာခြင်းတို့ ပါဝင် သည်။
Jacobson ၏ အဆိုအရ ထိုကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုကြောင့် စက္ကူအိတ်ရောင်းအား ၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူများကလည်း အလျင်အမြန် ပြန်လည်ခုခံကြသည်။
စက္ကူသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ပလပ်စတစ်ထက်ဘာမျှပိုကောင်းခြင်း မရှိဟု ၎င်းတို့က ပြန်လည် ချေပကြသည်။ “အမှိုက်ကျင်း တစ်ခုထဲတွင် ဘယ်အရာမျှ လျော့ပါးသွားခြင်းမရှိ၊ ပိုးမွှားများကြောင့် ပျက်စီးသွားနိုင်သည်ဆိုသော စက္ကူအိတ်များပင်လျှင် သည်အတိုင်း ကျန်နေသည်ဟု ၎င်းတို့၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို လူသိရှင်ကြား ထုတ် ဖော်ခဲ့သည်။
သို့ဖြင့် စက္ကူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေနိုင်ဟူသော အခိုင်အမာ ပြောဆိုချက်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ချေ ဖျက်လိုက်သည်” ဟု Jacobson က ဆိုသည်။
Business Communication Co., Inc. က ထုတ်ဝေသော ဈေးကွက်သုတေသန အစီရင်ခံစာတစ်ခု ဖြစ်သည့် ‘ပြောင်းလဲနေသော အိတ်ဈေးကွက်’ အရ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး ပလတ်စတစ်အိတ်ကို သုံးစွဲသူများက ကြိုက်နှစ်သက်ကြခြင်းကြောင့် ပလတ်စတစ်ဈေးကွက်ရှယ်ယာသည် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် ၅၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
ပြင်းထန်လှသော ထိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား အကောင်းဘက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ပလတ်စတစ် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စက္ကူထုတ်လုပ်သူများ နှစ်ဖက်စလုံးက ၎င်းတို့၏ ရောင်းအားများကို အသီးသီး မြှင့်တင်လိုကြကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။ သို့သော် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မည်ကို အမှန်တကယ် စိုးရိမ်ပူပန်မိ ကြောင်း နှစ်ဖက်စလုံးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားကြသည်။
Bank of America ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ်များဌာနက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ပဏာမလေ့ လာချက်တစ်ခုတွင် ပလတ်စတစ်အိတ်ပါးသည် ထုတ်လုပ်ရာ၌ စွမ်းအင်အနည်းငယ် ပိုမိုလိုအပ်သော်လည်း ၎င်း ကို ထုတ်လုပ်မည့်သူ ပိုများဖွယ်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို ထုတ်လုပ်ရာ၌ ရေနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို လျှော့ချသုံးစွဲထားခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။ (Bank of America, 1996. P.1).
ပလတ်စတစ်များ၏ အရည်သွေးကို လျှော့ချခြင်း (Degradable Plastics)
နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝ မှ ၄ဝဝ အထိ မပျက်မစီးကျန်ရှိနိုင်သည့် သမားရိုးကျ ပလတ်စတစ်နှင့် မတူသည့် အချက်မှာ ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များသည် လပိုင်းအတွင်း ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ (GAO, 1988, p.8).
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဗဟိုစာရင်းရုံး၏ အစီရင်ခံစာတွင် ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များသည် ကုန်းတွင်း နှင့်ပင်လယ်ထဲရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အပိုင်းအစများ၏သက်တမ်းကို လျှော့ချနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းတို့သည် မြေကျင်းများထဲရှိ စုပုံနေသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်း အရေအတွက်ကိုလည်း လျော့နည်းသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်သည်။
ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များ လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းစနစ်ပိုင်းအရ မရေရာမှုများက ယင်း ပြဿနာများကို လျှော့ချရန် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းအချို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် မီးပြင်းတိုက်၍ အပြောင်ရှင်းခြင်းတို့သည် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း များက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဖြေရှင်း နိုင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူအချို့က စောဒကတက်ကြသည်။
ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းအပြင် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် များနှင့်တွဲဖက်၍ အသုံးပြုရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖော်ထုတ်ပေးနေသည်ကို သတိပြုရမည်။
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့သည် ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်များ အသုံးပြုမှုကို မြှင့် တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်စွဲဖြင့် ရေးသားပေးပို့ခဲ့သော အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ဂလင်း ၏စာတွင် ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိစ္စတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို လေ့ လာမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ရန် ဗဟိုစာရင်းရုံးကို ၎င်းကမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗဟိုစာရင်းရုံးက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွင်းရှိ အရာရှိများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင် များကို ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ဗဟိုစာရင်းရုံး၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် အမျိုးသားသိပ္ပံပညာ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့သည် ပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ၁၂ခုကို အတူတကွ ထောက်ပံ့ကူညီလျက်ရှိရာ ၁၉၈၈-၈၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇သန်း ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း (Recycling vs incineration of Plastics)
ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမည်လော၊ သို့မဟုတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မည်လော ဆိုခြင်းမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
အချို့သောသူများက ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ (နှင့်စက္ကူ)ကို အမှိုက်က စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စွမ်းအင်ထုတ်ရန် မီးရှို့လိုက်သည့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများသည် လုံးဝ ပျောက်ဆုံးသွား ရသော်လည်း သုံးပြီးပစ္စည်းကို ပြန်လည် ထုတ်လုပ် အသုံးပြုသည့်နည်းမှာ ယင်းပစ္စည်းကို ထပ်တလဲလဲ ပြန် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
သုံးပြီးပစ္စည်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်အသုံးပြုခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ၌ ပိုမိုကောင်းမွန် သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံလာကြသည်။
ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သော Procter & Gamble and Lever Brothers အမည်ရှိ လုပ်ငန်းနှစ်ခု စလုံးက ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော အစွန်းချွတ်ဆေးပုလင်းများနှင့် အခြားလူသုံးကုန် ပစ္စည်းများတွင် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ပလတ်စတစ် ကော်စေ့များ၏ ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကို အသုံးပြုရန် ကတိကဝတ် ပြု ထားကြသည်။
အများပြည်သူတွေးဆချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည့်အချက်မှာ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများသည် ပြန်လည်ထုတ် လုပ်အသုံးပြုရန် အလွယ်ကူဆုံး ပစ္စည်းများထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု သန်းနှင့်ချီသော သုံးပြီးပလတ်စတစ် ထမင်း ဘူးများကို ဆေးသုတ်စုတ်တံများ၊ ယာဉ်လမ်းကြောင်းအချက်ပြ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ကလေးကစားစရာအရုပ်များ၊ ကြမ်းခင်းပြားများ၊ အမှိုက်ခြင်းများ၊ ပလတ်စတစ်ပြားများနှင့် အခြားအသုံးဝင်သော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီ၂ဝဝ အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သော Amoco က ပြောပြသည်။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပလတ်စတစ်အချိုရည်ပုလင်းများ၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို အထည်အလိပ်များနှင့် ဖိုင်ဘာများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလက်ကိုင်များ စသည်တို့အဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအချို့ကသုံးပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက္ကူပစ္စည်းများကို ဝယ် ယူရေး အစီအစဉ်များကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အရည်အ သွေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ယင်းသို့သောနည်းလမ်းများကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိနည်းပညာကြောင့် သုံးပြီး ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက္ကူပစ္စည်းများသည် ပစ္စည်းသစ်များထက် ထုတ်လုပ်စရိတ် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ လတ်တလောတွင် ပလတ်စတစ်ကို အသုံးပြုခြင်းက စက္ကူကို အသုံးပြုခြင်းထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုကောင်းမည်ဟု ထင်ရသည်။
T.E Yildrim ရေးသားသော
Paper/ Plastic, Rubbish and
The Environment ဆောင်းပါးကို
ပညာရေး T.E Yildrim စက္ကူ ပလတ်စတစ် ရဲမင်းသူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	Share:
အလက်ဇန္ဒား သည် ဂရိတ် လူမသိသူမသိဇာတ်လမ်း (ဆလိုင်းမှူးထန်)
မိခင်နို့ချို ရင်သွေးငယ်အတွက် အံ့ဖွယ်အာဟာရ (ကျော်ဆွေလွင်/ကလေးကျန်းမာရေး)
Archives Select Month August 2019 (9) July 2019 (13) June 2019 (7) May 2019 (2) March 2019 (2) February 2019 (6) January 2019 (7) December 2018 (11) November 2018 (9) October 2018 (6) September 2018 (15) August 2018 (15) July 2018 (6) June 2018 (6) May 2018 (9) April 2018 (13) March 2018 (18) February 2018 (9) January 2018 (14) December 2017 (11) November 2017 (13) October 2017 (20) September 2017 (24) August 2017 (26) July 2017 (33) June 2017 (37) May 2017 (24)
ဆရာတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း (သပြေလွင်/ပညာရေးကဏ္ဍ) December 14, 2017
လူသားဝါဒ နှင့် လူသားအပေါ်မေတ္တာထားခြင်း – ၃ July 10, 2019
ဆရာကြီးဂူလန်၏ပညာရေးအမြင် (နိဂုံး) October 13, 2017
အရှင်မြတ်၏မေတ္တာ (အပိုင်း-၁၄) August 20, 2019
အရှင်မြတ်၏မေတ္တာ (အပိုင်း-၁၃) August 15, 2019
အရှင်မြတ်၏မေတ္တာ (အပိုင်း-၁၂) August 10, 2019
အရှင်မြတ်၏မေတ္တာ (အပိုင်း-၁၁) August 9, 2019